Ukususa izinduna, ukiline isikhumba usebenzisa i-aloe, cucumber, utamatisi kanye no vitamin E
Ukuba muhle ebusweni
Aloe vera (inkalane)
Isusa izinduna, amabala yenze isikhumba sibe sihle futhi sicace. Yelapha isikhumba esishiswe yilanga, isize ukuswakamisa isikhumba esomile, yelapha izilonda, ukusikeka, yenze isikhumba esigugayo sibukeke sisisha. Isusa inkwethu yenze izinwele zikhule zinempilo. Uthatha ama-leaves enkalane, uwasike ngombese, ukhiphe lokhu okumhlophe okungamanzi, uzihlikihle ngakho isikhumba. Ukukhanyisa isikhumba esingacacile uzodinga i-Aloe Vera, ushukela kanye ne-lemon juice. Uzokugcoba lokhu, ulinde kome, bese ukugeza ngamanzi abandayo, uzokwenza lokhu zonke izinsuku. Ukususa i-kiwi nama-stretch marks uzohlanganisa i-aloe Vera, almond, uju kanye nobhanana, lokhu futhi ungakusebenzisa ebusweni kuzosusa amabala kwenze isikhumba sihlanzeke. Ukususa amabala amanyama, namabala enziwa izinduna esezasha, hlanganisa i-Aloe Vera ne-rice flour bese uyigcoba ebusweni, ulinde cishe 10 minutes bese uwasha ubuso. Uma ungenayo i-rice flour zigayele irice ibe yimpuphu.
Thenga amaphilisi angu-vitamin E lawa enziwe nge oil, wasike kuphume i-oil, bese uhlikihla ngawo esikhunjeni, azokwelapha ama-sctrech marks, ikiwi, isikhumba esomile nesibukeka sikhathele, isikhumba sakho sizobukeka sikilini futhi sishelela. Kwenze lokhu zonke izinsuku.
Shea butter isusa ama stretch marks, isuse i-kiwi emathangeni, yenze isikhumba sakho sibe sihle sithambe, isusa amabala, yelaphe isikhumba esishiwe yilanga. Hlikisa esikhumbeni sakho esinenkinga. Thenga i-Grade A ye-shea butter, ebhalwe ukuthi raw.
U-Cucumber uthambisa isikhumba wenze futhi sikhanye ngebala. Hlikihla u-cucumber esikhunjeni sakho zonke isinsuku ngaphambi kokuthi ulale. U-cucumber usebenza kahle uma uwuhlanganisa ne-lemon ukukhanyisa isikhumba.
Uma unesikhumba esichichayo, sebenzisa utamatisi, uhlikihle ngawo ebusweni, nakwi-kiwi futhi utamatisi uyasebenza. Uzohlikihla ngawo bese uyawuyeka from 20 -25 minutes bese uyawuwasha.